FSP Boeing 747-400LCF Dreamlifter FSX HOT
Ny Boeing 747 Large Cargo Freighter (LCF), koa dia nomenay anaram-bosotra Dreamlifter farany Boeing 747-400 nampiasaina hitaterana sy fiaramanidina avy amin'ny faritra isan-karazany mpamatsy for Boeing. Toy izany koa ny amin'ny Airbus A300-600ST hoe "karazany iray amin'izy io".
mahafinaritra add-on ho an'ny FSX ny hatsarana miavaka! Ity fonosana ity dia ahitana ny modely 3D misy ampahany maro mihetsiketsika, anisan'izany ny fiara fitaterana (jereo ny sary), ampiasao ny "Posky Utility" ny takelaka mba hiditra amin'ny sary rehetra. Mampidira feo avy amin'ny tena 747-400, rakibolana virtoaly sy 2D (ny default FSX) mifanaraka amin'io dikan-teny io, ny fiantraikany manokana, ny jiro amin'ny alina sns ... Vakio ny torolàlana ho an'ny fampahalalana bebe kokoa